တရုတ်ပြည်ရှိ Toyota အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်ခလုတ် ၃ ခုအစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case - LEDY TECHNOLOGY (HONG KONG) CO ။ , LIMITED
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Key Shell > Toyota အတွက် Car Key Shell > တိုယိုတာအမှတ်တံဆိပ်အတွက်ခလုတ်အစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case
အောက်ပါသည် Toyota No Logo အတွက် Buttons အစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case သုံးခုမိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Toyota အမှတ်အသားအတွက် Buttons အစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case ကိုပိုမိုနားလည်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
Toyota အမှတ်တံဆိပ်အတွက် Button ၃ ခုအစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case ၏ထုတ်ကုန်နိဒါန်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသော Toyota No Logo အတွက်ခလုတ်သုံးခုအစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case ကိုထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပနှင့်အမေရိကဈေးကွက်အများစုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမီးထွန်းရန်မိမိကိုယ်ကိုအပ်နှံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တရုတ်ရေရှည်လက်တွဲဖော်ဖြစ်လာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
အခြေအနေ: 100% အမှတ်တံဆိပ်အသစ်
Button: ခလုတ် ၃ ခု
Key Blank: ဟုတ်ကဲ့ (Toy43 Blade)
လိုဂို - မဟုတ်ပါ
Transponder Chip: မဟုတ်ဘူး
အီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီ - မရှိပါ
Toyota Camry Rav4 Corolla Prado Yaris Tarago အတွက်
Toyota အမှတ်အသားအတွက်ခလုတ် ၃ ခုအစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case ၏ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင်နှင့်အသုံးပြုမှု
ကျိုးလွယ်သောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်များဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးခြင်း။
2.Key case နှင့် uncut key blade သာ။
3. သင့်ရဲ့မူရင်းနှင့်အတူဒေသခံသော့ခတ် / ကုန်သည်များကဖြတ် Blade ကိုရယူပါ။
၄။ အတွင်းရှိအီလက်ထရွန်ကို (immobilizer / transponder ချစ်ပ်ပါ ၀ င်သည်) ကိုမူလအဝေးမှယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက shell ထဲသို့ထည့်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
1 X ကို Key ကို Shell က
Toyota အမှတ်တံဆိပ်အတွက် Buttons အစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case ၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
၁။ ဤပစ္စည်းသည်အဝေးတစ်နေရာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဝေးလံသောသော့အခွံအခွံအစားထိုးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အတွင်းပိုင်း (ဝေးလံခေါင်သီ / အီလက်ထရောနစ် / transponder ချစ်ပ်) ယူနစ်မရှိပါ။
2. ဒေသခံသော့ခတ်သူ / အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကသင်၏မူရင်းနှင့်အတူဓါးကိုဖြတ်တောက်ပါ။
၃။ အတွင်းပိုင်းအီလက်ထရွန်ကို (immobilizer / transponder ချစ်ပ်ပါ ၀ င်သည်) ကိုမူလအဝေးမှယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက shell ထဲသို့ထည့်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
လက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းကြောင့် ၁.၂ မီလီမီတာ / လက်မအရွယ်အစားသွေဖည်မှုသည်သာမန်ကိစ္စဖြစ်သည်။ သင်မ ၀ ယ်ခင်သင့်အရွယ်အစားကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
5. ပုံကတကယ့်ထုတ်ကုန်ပါ။ အင်တာနက်မှ download လုပ်မထားပါ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ key shell ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ၊ သင်မ ၀ ယ်ခင်သင့်ပစ္စည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်တူညီကြောင်းသေချာစေပါ။
တိုယိုတာအမှတ်တံဆိပ်အတွက်ခလုတ် ၃ ခုအစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
သင်ငွေပေးပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အမှာစာကို ၁-၃ ရက်အတွင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အရေအတွက်သည်မြင့်မားပြီးသင်လိုချင်သောကားမော်ဒယ်လ်နှင့်အတူကားသော့လိုအပ်ပါကသင်၏အမှာစာကိုပြင်ဆင်ရန် 3-7days ခန့်လိုအပ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့လိုဂိုကိုဖုံးဖို့အတွက်အနက်ရောင်တိပ်ခွေကိုသုံးရမယ်။ ဒါကမင်းရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။
ထုပ်ပိုးပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့ဟာ China Post, DHL, FEDEX-IE / IP, TNT, Aramex ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။
A: ကားပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင်သင်၏ကားမော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ၊ သို့မဟုတ် catalog ရရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Q: သင်၏စာမျက်နှာတွင်သော့မျက်နှာဖုံးကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ပါ၊ သို့သော်သင်၎င်းကိုထောက်ပံ့နိုင်ပါသလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးအားလုံးကိုအွန်လိုင်းစတိုးတွင်ပြသနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဤမျှလောက်များစွာသောအမှတ်တံဆိပ်အမည် Alibaba စတိုးတွင်မွမ်းမံရန်ခွင့်မပြုပါ။ သင်လိုချင်တာကိုရှာမတွေ့ပါက catalog ရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
A: အရွယ်အစား - ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်း။ ၎င်းသည်သင်၏မူလသော့အရွယ်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။
အလေးချိန် - မတူညီသောအလေးချိန်ရှိသည့်ကွဲပြားသောကားမော်ဒယ်များမှာ ၀.၀၁ ကီလိုဂရမ်မှ ၀.၀၅ ကီလိုဂရမ်အထိရှိသည်။
မေး။ ။ ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခွန်ကအရမ်းမြင့်တယ်။
A: Paypal၊ Western Union၊ T / T၊ Credit Card၊ Aliexpress ကိုလက်ခံပါသည်။
hot Tags:: တိုယိုတာအမှတ်တံဆိပ်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံတွင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ခြင်း၊ စျေးပေါခြင်း၊ လျှော့စျေး၊ စျေးနှုန်း၊ စျေးနှုန်း၊ ဈေးနှုန်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊
3 ခလုတ်များ Key Shell3 ခလုတ်ကားသော့3 ခလုတ်များ Remote Key ShellRemote Car Key ခလုတ် ၃ ခုဝေးလံခေါင်သီ3ခလုတ်ကိုလှန်ကားတစ်စီး key ကို fob
လိုဂိုနှင့်အတူ Toyota Prius အတွက် Buttons အစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case
တိုယိုတာအမှတ်တံဆိပ်အတွက်ခလုတ်သုံးခုအစားထိုး Car Remote Key Shell Fob Case
တိုယိုတာ Corolla RAV4 အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ခလုတ် ၃ ခုအစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case
1 ဘေးထွက် Button အစားထိုးတိုယိုတာ Carina Estima Harrier Previa Corolla Celica အတွက်အမှတ်အသားအဘယ်သူမျှမလိုဂိုအတွက် Remote Car Key Shell Fob Case
တိုယိုတာ Corolla RAV4 အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ခလုတ် ၂ ခုအစားထိုး Remote Car Key Shell Fob Case